Genesis 17 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Abraham bɛba abɛyɛ aman pii agya (1-8)
Wɔsesaa Abram din frɛɛ no Abraham (5)
Apam a ɛfa twetiatwa ho (9-14)
Wɔsesaa Sarai din frɛɛ no Sara (15-17)
Wɔhyɛɛ no bɔ sɛ ɔbɛwo Isak (18-27)
17 Bere a Abram dii mfe 99 no, Yehowa yii ne ho adi kyerɛɛ no kae sɛ: “Mene ade nyinaa so Tumfo Nyankopɔn. Nantew m’akwan so, na mma asɛm biara mmma wo ho.* 2 Mɛma apam a me ne wo ayɛ no aba mu,+ na mɛma w’asefo adɔɔso papaapa.”+ 3 Ɛnna Abram de n’anim butuw fam, na Onyankopɔn toaa so ka kyerɛɛ no sɛ: 4 “Hwɛ, me na me ne wo ayɛ apam;+ wobɛyɛ aman pii agya.+ 5 Wɔremfrɛ wo Abram* bio, na mmom wɔbɛfrɛ wo Abraham* efisɛ mɛma woayɛ aman pii agya. 6 Mɛma w’ase atrɛw kɛse paa na mɛma woayɛ aman, na ahemfo befi wo mu aba.+ 7 “Na mɛma apam a me ne wo ne w’aseni* ayɛ no atena hɔ+ sɛ daa apam de akosi awo ntoatoaso a ɛbɛba nyinaa so, na wo ne w’aseni* a obedi w’akyi aba nyinaa, mɛyɛ mo Nyankopɔn. 8 Kaanan asaase a wobɛsoɛɛ so sɛ ɔhɔho no,+ mede ne nyinaa bɛma wo ne w’asefo* a wobedi w’akyi aba no sɛ mo agyapade daa; na mɛyɛ wɔn Nyankopɔn.”+ 9 Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham bio sɛ: “Di m’apam so, wo ne w’asefo* ne wɔn awo ntoatoaso a wobedi akyi aba nyinaa. 10 Apam a me ne wo ayɛ a wo ne w’asefo* a wobedi w’akyi aba nyinaa bedi so no ni: Mo mu ɔbarima biara ntwa twetia.*+ 11 Muntwa twetia na ɛnyɛ apam a me ne mo ayɛ no ho sɛnkyerɛnne.+ 12 Mo awo ntoatoaso nyinaa mu no, sɛ mo mu ɔbarima biara di nnawɔtwe a, wɔwoo no wo fi oo, ɔnyɛ w’aseni* nanso wode sika tɔɔ no fii ɔhɔho hɔ oo, muntwa no twetia.+ 13 Ɛsɛ sɛ ɔbarima biara a wɔawo no wo fi ne obiara a wode sika atɔ no no twa twetia;+ na m’apam ho sɛnkyerɛnne a ɛwɔ mo honam mu yi bɛyɛ daa apam. 14 Ɔbarima biara a wontwaa no twetia no, saa onipa* no, sɛ wantwa twetia a, wonkum no.* Wabu m’apam so.” 15 Ɛnna Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ: “Wo yere Sarai*+ nso, mfrɛ no Sarai bio, efisɛ afei de wɔbɛfrɛ no Sara.* 16 Mehyira no na mama wawo ɔbabarima nso ama wo;+ mehyira no na mama wayɛ aman; na n’asefo bɛyɛ ahemfo.” 17 Na Abraham tee no, ɔde n’anim butuw fam serewee, na ɔkae wɔ ne komam sɛ:+ “Ɔbarima a wadi mfe 100 betumi anya ɔba, na Sara nso, ɔbea a wadi mfe 90 no bɛwo anaa?”+ 18 Enti Abraham ka kyerɛɛ nokware Nyankopɔn no sɛ: “Minyae a, anka woahyira Ismael!”+ 19 Ɛnna Onyankopɔn kae sɛ: “Hu sɛ wo yere Sara bɛwo ɔbabarima ama wo, na to no din Isak.*+ Mɛma me ne n’apam agyina, na ayɛ daa apam ama n’asefo.*+ 20 Na w’abisade a ɛfa Ismael ho no nso, mate. Hwɛ, mehyira no ama n’ase atrɛw na n’asefo ayɛ pii. Mpanyimfo 12 befi ne mu aba, na mɛma wayɛ ɔman kɛse.+ 21 Nanso m’apam no de, ɛbɛba mu wɔ Sara ba Isak+ a ɔbɛwo no afe sesɛɛ no so.”+ 22 Bere a Onyankopɔn ne Abraham kasa wiei no, ogyaw no hɔ kɔɔ soro. 23 Ɛnna Abraham faa ne ba Ismael ne mmarima a wɔwoo wɔn wɔ ne fi no nyinaa ne obiara a ɔde sika tɔɔ no, ɔbarima biara a ɔwɔ Abraham fi, na otwaa wɔn twetia saa da no ara sɛnea Onyankopɔn ka kyerɛɛ no no.+ 24 Wotwaa Abraham twetia+ no, na wadi mfe 99. 25 Na ne ba Ismael nso, bere a wotwaa no twetia no, na wadi mfe 13.+ 26 Enti saa da no ara na wotwaa Abraham ne ne ba Ismael nyinaa twetia. 27 Ne fi mmarima nyinaa, wɔn a wɔwoo wɔn ofie hɔ ne wɔn a ɔde sika tɔɔ wɔn fii ahɔho hɔ nyinaa nso, wotwaa wɔn twetia.
^ Anaa “na wie pɛyɛ.”
^ Ɛkyerɛ, “Agya No Korɔn (Wɔama No So).”
^ Ɛkyerɛ, “Dodow Agya (Nnipadɔm Agya); Nnipa Pii Agya.”
^ Anaa “ntwa ne dua.”
^ Anaa “wobetwa no afi ne nkurɔfo mu akyene.”
^ Ebetumi akyerɛ “Aperepere.”
^ Ɛkyerɛ, “Ɔdehye.”
^ Ɛkyerɛ, “Ɔserew.”